Wasiirka Boostada & Isgaadhsiinta Soomaaliya oo soo dhoweeyay ansixinta Hindise-sharciyeedka Xeerka Isgaadhsiinta Qaranka – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Wasiirka Boostada, Isgaadhsiinta & Teknoolojiyada Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhoweeyay go’aankii ay Golaha Wasiirradu shalay ku ansixiyeen Hindise-sharciyeedka Xeerka Isgaadhsiinta Qaranka oo ay soo diyaarisey Wasaaradda Boostada, Isgaadhsiinta & Teknoolojiyada.
Xeerkan oo soo jiitamayay sanado badan ayaa la dardargeliyay bilihii la soo dhaafay si loogu guuleysto horumarinta iyo xeer-nidaaminta Isgaadhsiinta dalka, isla markaana loo daryeelo xuquuqda isticmaalayaasha adeegyadan iyo shirkadaha isgaadhsiinta dalka.
Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta & Teknoolojiyada ayaa bilihii la soo dhaafay qabanqaabisay wada-tashi balaadhan oo looga arrinsanayay xeerkan, iyadoo kulamadaas ay ka qeybgaleen qeybaha kala duwan ee bulshada, Guddiga Isgaadhsiinta iyo Warfaafinta ee Golaha Shacabka, dawlad-goboleedyada, shirkadaha adeegga isgaadhsiinta iyo internet-ka iyo bahda waxbarashada.
Wasiirka Boostada, Isgaadhsiinta iyo Teknoolojiyada, Mudane Eng Cabdi Cashuur Xasan, ayaa sheegay in ansixinta sharcigan uu ka mid ahaa waxyaabaha mudnaanta koowaad u leh hoggaanka cusub ee Wasaaradda. “Arrinta ugu muhiimsan ee si degdeg ah loogu baahan yahay waa in sharci iyo nidaam loo helo isgaadhsiinta Soomaaliya oo horumar weyn sameysay. Marka sharcigan uu ansixiyo Baarlamaanka, wuxuu shirkadaha u furi doonaa fursado badan, wuxuuna noo sahlayaa inaan shirkadaheena ku difaaci karno dalka gudahiisa iyo heer caalamiba”.